Akukho nto ivula ii-headphone ze-TWS, iNdlebe (1) ngexabiso lokudilizwa | IPhone iindaba
Intengiso yee-headphone ezingenazingcingo ikhule ngokumangalisayo ukusukela oko iApple yasungula iiAirPods kwaye emva kokufika kwe IProPods Pro, Endleleni, iimveliso ezininzi zibonise ukuba ziyakwazi ukwenza izinto kakuhle ngamaxabiso afanelekileyo, anjengeHuawei.
UCarl Pei, owayesakuba ngumseki we-OnePlus, usungula ii-headphone zeNdlebe (1) phantsi kweLutho uphawu, ngeenjongo zokubonelela ngomgangatho olungileyo / ixabiso lamaxabiso. Makhe sijonge le mbangi intsha inzima kwaye iphume kwi-AirPods Pro kwaye ithembisa ukubonelela ngeziphumo ezisemgangathweni ezingaphantsi kwe-100 euro.
Ezi ntloko zentloko (1) ziza nazo I-Bluetooth 5.2 yokunxibelelana ngaphandle kwamacingo, ukucinywa kwengxolo esebenzayo (ANC), ukumelana kwamanzi ne-IPX4 kunye nebhokisi enokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye ne-USB-C port, ngaphandle kokuhlawula enye i-euro ngaphezulu. Ngelishwa, ngalo mzuzu "ukudibanisa ngokukhawuleza" okanye ukuncediswa kokubhangiswa kuya kuhambelana kuphela nezixhobo ze-Android, khumbula ukuba uCarl Pei ungumthandi waleNkqubo yokuSebenza.
Ngokurhoxiswa kwengxolo babheja kwimakrofoni ezintathu kwaye safumanisa iindlela ezintathu ezahlukeneyo: IMaximo, ukuKhanya kunye nohlobo lokungafihli, ukuze unganqamki ngokupheleleyo ngaphandle.
Kwithiyori baya kubonelela phantse iiyure ezintandathu zokuzimela ngengxolo esebenzayo yokucinywa ingasebenzi kunye neeyure ezingama-34 xa zizonke ukuba sinentlawulo enikezelwa lelo tyala. Kwimeko apho sisebenze ukucinywa kwengxolo siya kuba neeyure ezi-3 zokuzimela, ezingama-24 xa zizonke ukuba sinetyala kwibhokisi. Ityala licacile kwaye kuyilo lusikhumbuza ngeHuawei's AirPods Pro kunye neFreebuds 4 kumxube.
Ngokucacileyo baya kuba nesicelo sakho sokuhlengahlengisa ukulingana, ukhetho "Khangela" kunye nohlaziyo lwesoftware. Kwinqanaba loncedo lokuva sine-11,6-millimeter yokuqhuba ehlengahlengiswe yinkampani yaseSweden iTeenage Engineering. KUNYEIxabiso liya kuba ngama-99 euros kwaye liya kufikelela kumazwe angama-45 ahlukeneyo ngo-Agasti 17.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Akukho nto ivula ii-headphone ze-TWS, iNdlebe (1) ngexabiso lokuwisa
Akukho ludwe lwedatha lwendlebe (1)
AKUKHO NANTSI INDLELA (1)
Umnxeba: 28,9 x 21,5 x 23,5mm
Ityala: 58,6 x 58,6 x 23,7 mm
Ii-headphone: i-4,7g ngentloko nganye
Ityala: 57,4 g
Ii-headphone: 31 mAh ngefowuni nganye
Ityala: 570 mAh
Ukufikelela kwiiyure ezili-34 zokuzimela
Iiprofayili A2DP, AVRCP, HFP
Iikhowudi ze-AAC kunye ne-SBC
I-Android 5.1 nangaphezulu
IOS 11 nangaphezulu
INTO EVIKELA AMANZI:
UKUQHUBA UKUQHUBA UKUQHUBA:
Ewe (-40 dB)
UKURHOXISWA KOMSINDO OBALASELEYO:
Unxibelelwano lweBluetooth 5.2 linoxanduva lokudibanisa ezi ntloko kuzo zonke iintlobo zezixhobo kunye nezixhobo eziphathwayo, kwaye akukho nto inesicelo se-Android kunye ne-iOS esinokulawula ngayo ii-equalizers okanye senze ngokusesikweni ukuthinta izinto zokulawula imisebenzi yokudlala kwakhona.
I-Intel ijoyina umlo, ifuna ukubetha iApple Silicon njengeQualcomm